Eskişehir ayaa tusaale u ah wadooyin la taaban karo - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirEskişehir wuxuu tusaale u yahay wadooyin la taaban karo
11 / 11 / 2019 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, Asphalt News, GUUD, WADADA, TURKEY
Eskisehir ayaa tusaale u ah wadooyin la taaban karo
Eskişehir wuxuu tusaale ka dhigayaa wadooyin la taaban karo; Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir, oo tusaale u ah hay’ado badan gaar ahaan wadooyinkeeda la taaban karo ee ka shaqeeya meelaha miyiga ah, 13-14 2019, oo lagu qaban doono Ankara inta u dhaxaysa taariikha Noofembar 1. Waxay ahayd degmadii kaliya ee lagu casuumay inay soo bandhigto Shirka Kontaroolka Wadooyinka.
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Wasaaradda, General Directorate of Waddooyinka, Turkey Cement Association-saareyaasha iyo EUPAVE Short magaca 1 kaas oo lagu qaban doono iskaashi la taaban karo ee Yurub Sallaxa Association. Waddooyinka la taaban karo Congress in xarumo badan oo dibada, ururada iyo shakhsiyaadka ka qaybgalay kulan oo ka mid ah degmooyinka kaliya ee Turkey Eskişehir degmada Metropolitan ka dhigi doonaa soojeedin ka qaybgalayaasha. Koongareeska 3. Masuuliyinta Wasaarada Dayactirka iyo Dayactirka Jidadka waxay cadeeyeen inay sameyn doonaan soojeedin balaaran oo kusaabsan muunadooyinka la taaban karo ee wadada oo lagu soo arkay kalfadhiga ilaa maantana ay aad ugu faraxsanyihiin inay tahay degmada kaliya ee soo bandhiga shirweynaha.
Iyagoo xusaya in wadooyinka la taaban karo ay ka dheer yihiin kana dhaqaale badan yihiin wadooyinka laamiga ah, saraakiisha waxay cadeeyeen in Dowlada Hoose ee Magaalada Eskişehir ay sii wadi doonto door bidida wadooyinka la taaban karo gaar ahaan wadooyinka miyiga ee banaanka ka ah bartamaha magaalada.
Waddooyinka Magaalada Istanbul ayaa Noqday Mawduuca Tartanka sawir-qaadista